Resadresaka nifanaovana tamin’i Bektour Iskender, mpiara-nanorina ilay toeram-pivarotana anà Kyrgyz notafihina noho ny fanadihadiana mikasika ny kolikoly · Global Voices teny Malagasy
Novambra, voatifitra ilay nanaporitsaka ny tantara, miatrika fitsarana ny Kloop.kg
Voadika ny 24 Febroary 2020 15:28 GMT
Sarin'i Aierken Saimati (eo afovoany), iray amin'ireo mpandrindra ny fandaharanasan-kolikoly lehibe izay raha ny fantatr'ireo mpiandraikitra ny fadintseranana any Kyrgyzstan dia nitatitra vola an-tapitrisany maro. Sary ravaka (c) avy amin'i Edin Pasović ho an'ny OCCRP / Kloop. Fampiasana nahazoana alàlana.
Matetika i Kyrgyzstan no lazaina fa hafahafa indrindra amin'ireo firenena dimy ao amin'ny faritra Azia Afovoany izay an'ny Sovietika taloha. Mahazo laharana tsara avy amin'ireo mpiambina ny zon'olombelona mihoatra noho ireo mpifanolo-bodirindrina aminy rehetra ity Repoblika misy olona enina tapitrisa ity amin'ny resaka fahalalahana maneho hevitra, fahamaroana ara-politika sy fahasamihafan'ny haino aman-jery. Tsy fitoviana mifangarika amin'i Shina, Kazakhstan, ary Obekistana izany. Kanefa, vao mainka mihamatroka hatrany izany laza izany satria mihamaro ireo fanafihana mianjady amin'ny haino aman-jery tsy miankina eo anivon'ilay tantara ratsinà fanalambaràka ara-politika lehibe izay nipoaka taorian'ny famoahana ireo fanadihadiana nataon'ireo haino aman-jery ao an-toerana sy iraisam-pirenena.
Tamin'ny 3 Desambra, ny sehatra haino aman-jery an'ny olom-pirenena Kloop.kg, ilay tetikasa fitaterana mikasika ny heloka bevava nomanina sy ny kolikoly (OCCRP), ary ny Azattyk, ilay tolotry ny Radio Free Eoropa / Radio Liberty (RFE / RL) amin'ny teny Kyrgyz dia namoaka fanadihadiana nanambara ny fomba namoahana vola dolara an-tapitrisany avy tao Kyrgyzstana, indrindra nankany Tiorkia, nataonà vondrona iray tantanan'ilay mpandraharaha Aierken Saimati avy amin'ny foko Uyghur avy any Shina izay maty nisy nitifitra tany Istanbul tamin'ny 10 Novambra. Talohan'ny nahafatesany, nizara antontan-taratasy ara-bola maro izay miampanga Kyrgyz maro mpandraharaha i Saiermati izay nahitana koa ny Filoha lefitry ny sampandraharahan'ny fadintseranana any Kyrgyzstana, Raimbek Matraimov. Araka ny lazain'i Saimati, nahazo tombontsoa tamin'ilay tetikady famotsiambola i Matraimov sy ireo orinasany.
Mandà mafy ireo fiampangàna ireo i Matraimov, izay nitoriany ny Kloop, OCCRP, sy ny RFE/RL hiatrika fitsarana noho ny fanalambaraka taorian'ilay famoahana ny fanadihadiana nataon'izy ireo. Tamin'ny 12 Desambra, nambara fa vokatry ny fanapahankevitry ny fitsarana mikasika ilay fampiakarana fitsarana noho ny fanalambaraka nataon'i Matraimov dia nogiazana ny kaontin'ny Kloop any amin'ny banky.
Nangatahako i Bektour Iskender, mpiara-nanorina ny Kloop, mba haneho hevitra manoloana ny zava-mitranga ary hiresaka bebe kokoa mikasika ireo fanamby atrehan'ireo mpanao gazety any Kyrgyzstana ankehitriny. Novaina ho fohifohy kokoa ilay resadresaka nifanaovana.
Filip Noubel : vao avy nampandrenesina ny Kloop, ilay sehatra haino aman-jery an'olom-pirenena izay niarahanao nanorina tamin'ny 2007 hoe nodidian'ny mpitsara iray ny hanagiazana ireo kaontiny any amin'ny banky. Ny antony ofisialy dia ny hoe “nanimba ny lazan”ilay tale lefitry ny fadintseranana any Kyrgyzstana taloha, i Raimbek Matraimov, ilay fanadihadiana miady amin'ny kolikoly nataonareo vao haingana, izay itakiany 12,5 tapitrisa soms (eo amin'ny 180 000 dolara eo) ho onitra. Efa nanampo valiny toy izany ve ianareo?
Bektour Iskender: Am-pahatsorana, eny. Nampanantena ny hametraka fitoriana an'ireo mpanao gazety i Raimbek Matraimov tamin'ny herinandro lasa teo, vantany vao avy nanontanian'ny GKNB, ireo sampandraharahan'ny fiarovana aty Kyrgyzstana. Tsy nahagaga anay mihitsy izany vaovao izany, na tsy nandefa fampilazana ofisialy ho anay aza ny mpisolovava azy. Ankoatr'izany, ilay fiampangàna dia fahafahana lehibe tsy mampino ny hahitra an'i Matraimov sy ny fianakaviany eo anoloan'ny fitsarana. Zavatra efa nandrasan'ny olona maro taty Kyrgyzstana koa mantsy izany. Manome anay vintana tokana hanaporofoana ireo zava-misy rehetra navoakanay tao anatin'ilay fanadihadiana ao amin'ny efitrano fitsarana izany. Manantena izahay fa ho ara-drariny ilay fitsarana, ary ho azonay atao ny hanontany an'i Matraimov sy ireo solontena ao amin'ny orinasany [fadintseranana] eo imason'ny mpitsara sy ny vahoaka. Mazava ho azy, tsy mahafapo anay ny fanapahankevitry ny fitsarana ny hangiazana ny kaontinay any amin'ny banky, famelezana manala baraka ny fahalalahan'ny asa fanaovana gazety izany, ary hampiakatra izany fanapahankevitra izany izahay.
FN: Matetika voalaza fa firenena faran'izay malalaka na faran'izay tsy fanjakantokana indrindra any Azia Afovoany i Kyrgyzstana. Kanefa mijaly noho ny kolikoly, fiovàna ara-politika mahery setra, ary fifindramonina faobe. Ao anatin'ny toejavatra toy izany, inona no fanamby atrehinao sy ny ekipanao isanandro rehefa manao fanaovan-gazety fanadihadiana?
BI: Zavatra iray azoko lazaina sy ahazoako antoka dia tsy miatrika ny fandrahonan'ny fitondrana jadona i Kyrgyzstana. Raha izany no jerena dia tsara toerana kokoa izahay mpanao gazety noho ireo mpiara-miasa aminay any amin'ny firenena hafa Aziatika Afovoany. Fa tsy midika izany hoe tsy miatrika zava-tsarotra izahay. Niatrika maro tamin'izany izahay taloha sy taorian'ny namoahanay ilay fanadihadiana mikasika ny kolikoly misy eo anivon'ireo mpiandraikitra ny fadintseranana. Niatrika fanarahamaso be ireo mpanao gazetinay raha nanangona vaovao. Nisy fanafihana DDOS tamin'ny tranonkalanay. Misy onjana fanafihana maro mikasika anay ao amin'ny tambajotra sosialy : nameno ireo lahatsoratray tamin'ny fanehoankevitra izay niezaka ny hanaratsy ny fanadihadiana nataonay izy ireny. Misy fanentanana fanalambaraka tany amin'ny tambajotra sosialy mpiaro ny governemanta izay mamaritra anay ho toy ny ‘mpiasan'ny Tandrefana’ na zavatra tahàka izany. Ny tena nampahatahotra tamin'izany rehetra izany dia novonoina tany Istanbul tamin'ny volana Novambra i Aierken Saimiti — ilay olona namoaka ireo rakitra maro mikasika ity raharaha ity. Ary farany, miatrika ity fitsarana ity izahay ankehitriny. Na dia tsy miangatra aza ny fitsarana, mbola ho fanamby goavana ho anay izany.
FN: Niarahanareo tamin'ny OCCRP sy ny Azattyk ny fanaovana fanadihadiana momba an'i Matraimov sy ny fianakaviany. Inona no tombony sy ny lesoka amin'ny fanànana vahiny mpiaramiasa?
BI: Te-hilaza aho hoe tsy misy afa-tsy tombony. Ny fiarahana miasa amin'ny OCCRP dia tena midika fa ireo fanafihana rehetra atao anay dia hiteraka avy hatrany valiny avy amin'ny vondrompiarahamonin'ireo media iraisampirenena. Mety ho sarotrarotra kokoa ny hanohitra ireo tsindry raha toa miasa irery izahay
FN: Inona avy ireo tena loza mitatao amin'izao fotoana izao ho an'i Kloop sy ireo mpanao gazety ao aminy?
BI: Ny hetsika fangiazana ny kaontinay any amin'ny banky dia ezaka hanangolena ny asanay. Mazava loatra fa tsy hanakana anay tsy hiasa izany, fa hamorona fahasahiranana mibaribary kokoa tsy maintsy ihoaranay. Misy hatrany koa ny loza mitatao ho an'ny fitonian'ireo mpanao gazetinay.
FN: Fanohanana avy ao anatiny sy iraisampirenena tahaka ny ahoana no tena ilainareo ao anatin'ity toedraharaha ity mba hiantohana ny fitohizan'ny asan'ny Kloop sy ho fandraisana anjara amin'ny hisian'ny sata maha-fiarahamonina iray isan'ny tena malalaka indrindra an'i Kyrgyzstan aty Azia Afovoany?
BI: Nanomboka fanentanana iray ho fanangonana vola avy eny ifotony izahay, izay indrisy fa tsy afaka raisina afa-tsy amin'ny teny rosiàna monja hatreto. Koa satria mety hiatrika olana ara-bola izahay ato ho ato, tena iankinan'ny aina io karazana fanohanana io amin'izao fotoana izao. Mazava loatra fa tena zavadehibe io ho an'ny vondrompiarahamonina iraisampirenena — ary indrindra indrindra fa ireo fikambanana iraisampirenena izay maha-mpikambana an'i Kyrgyzstana — mba hampahatsiahy amin'ireo Kyrgyz manampahefana fa tokony hiantoka ny hisian'ny fitsarana malalaka sy tsy mitanila ry zareo. Tokony ho tonga saina izao ny governemanta Kyrgyz momba ny hoe ho lasa hatraiza erantany ity tantara ity
FN : Tsy misy mahafantatra ny hoavy, fa noho ny lazan'ilay tantara ratsin'i Matraimov, sy ny ankamaroan'ireo ao amin'ny governemanta Kyrgyz dia miafara amin'ny hoe naongan'ny fihetsiketseham-bahoaka sy mahery setra, ahoana no handanjalanjanareo ireo tsahotsahon'ny olona amin'izao fotoana izao?
BI:Fotoana fohy taorian'ny namoahanay ny ampahany voalohany tamin'ilay fanadihadiana niraisana, tany amin'ny faran'ny Novambra, nisy hetsibahoaka matanjaka nahavory olona 1.000 tao Bishek [renivohitra]. Koa satria tsy nitanila ireo manampahefana tamin'ny fijerena ny raharaha Matraimov, nirona nankany amin'ny tsy fitokisana faobe ny hetsika ataon'ny governemanta sy ireo mpikambana ao amin'ny antenimiera ary ny rafitry ny fitsaràna ny zavamisy. Na izany aza, asehon'io toejavatra io ny fahafahana goavana ananan'ireo politisiana vaventy maniry ny hanao ilay tolona anoherana ny kolikoly ho tafiditra ao anatin'ny fandaharam-potoanan-dry zareo.
Zavadehibe izany, indrindra fa ho atao amin'ny taona ho avy io ny fifidianana parlemantera, ary na iza na iza antoko afaka mahavita manao fampielezankevitra azo ianteherana hanohitra ny kolikoly, dia hahazo vato marobe.